Mon Petit Avatar: Yet another food post
A few days ago, I readapost, which reminds me of my sister by the way, in this blog. My sisters always love to eat that and I guess it runs in the family. So I got the idea of eating that at home with cooked chicken chunk, and asked my significant other to buy roasted chicken from one of5dao franchised shop. I chose to eat that chicken as I got lazy, that’s one good reason and don’t really like the boiled chicken. And sometimes I wonder why I can never be thin, stupid, ain’t I? I did fry those masala vadas using Mhwe mixture, with thinly sliced onion, and chili, but without mint or coriander, just because I don’t have them that day. There you have it, my food craving number 1 during these days and at least you should give me some credits for try to cook something at home.
Actually I couldn’t finish that chicken in one meal and kept the leftover for the next day. Then I figured I could mix that with fried potatoes withalittle bit of light soya sauce, oyster sauce and voilà, my food craving number 2. To accompany with the chicken, I made samber soup, by using sambar mix that I got from Mustafa. I did not follow the directions from the pack, as it doesn’t mention putting oil in the soup, lol! Inacooking pan, addabit of oil, along with onion, garlic, ginger, coriander seed, jeer seed, dried chilies, and sautéed them until fragrant. Then add boiled water, already soaked dahl powder with cold water, tamarind paste and let it boil forawhile. Finally add vegetables of my choice and here is my vegetables sambar soup.
As you may have already guessed, my food craving number3is fried chicken wing, which I marinated with justapinch of salt and pepper and when it is nicely brown and cooked, sprinkled them with black pepper over the top. It was simply and yet delicious snack of all time for me.
Posted by Mon Petit Avatar at 10:49 PM
ဘရာကြော်သုပ်လေး စားချင်စရာ...။ ကြက်ကင်ကိုမျှင်ပြီးထည့်စားတာလား...။ သီးစုံကုလားဟင်းနဲ့ ကြက်တောင်ပံကြော်လေးနဲ့ လိုက်ဖက်တာ...။ မွန်က စကာင်္ပူရောက်နေတာလား....။ အာဒမ် အင်းဝသွားကြည့်ပြီးရင် ရုပ်ရှင်ခံစားမှုပို့စ်လေးတစ်ခုတော့တင်ပေးဦးနော်...။ အဲဒီကားကို ဒီမှာရုံတင်တော့ သွားမကြည့်ဖြစ်ဘူး...။
ဒါပေမဲ့ အများဆုံးနှိုက်မိတာက ကြက်ကင်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်း)
WWKM @နန်းဝါ၀ါမောင် said...
အိပ်မပျော်သေးလို့ အလည်ရောက်လာတာ ဗိုက်ဆာသွားတယ်။
ဟင်းချက်တော်တဲ့ ညီမလေး.. ဆရာကတော့ ကံကောင်းတာပဲ။ :)
အယ် ဝေ့ဟေးဟေးးးးးးးးးးးးးးးးးး မန့်လို့ရပြီ မွန်လေးရေ တိလား)
ဆမ်ဘာရ်ကို အီတလီနဲပ တို့စား သိတ်ကောင်းပေါ့နော့း)
ဟင်းသာ မချက်တတ်ဖူးပြောတယ်။ ကြက်တောင်ပံကြော်ကလည်း
သပ်ရပ်ပြီး လှပနေတာပဲနော်း)
ဟော..ဟော..အစွမ်းတွေပေါ်လာပြီ။ သိပြီးသား ဒီလိုတော်တယ်ဆုိုတာကို နော်။
မကြိုက်တာတခုမှကိုမပါဘူး။ ချက်ချင်းတောင် လုပ်စားချင်စိတ်ပေါက်လာပြီး)
ဟင်းချက်ထားတာ သန့် ပြီး သပ်ရပ်နေတာပဲ။
ခရက်ဒစ် ပေးပါတယ်ဗျာ..၊ အားလုံးက စားချင်စရာတွေ ချည်းပါပဲ၊ အချင်းချင်း လိုက်ဖက်တဲ့အပြင် အရသာလည်း ရှိမယ့်ပုံ...၊ အပေါ်ဆုံး စာပိုဒ်က ၅ ကြောင်းမြောက်အဆုံးနဲ့ ၆ ကြောင်းမြောက်အစ ကိုတော့ အတော်လေး သဘောကျပြီး ပြုံးမိသွားတယ်...၊း)
အိမ်မှာတော့ အများအားဖြင့် ကြက်တောင်ပံကို အကြော်မှုန့်ရယ် bread crump seasoning ရယ်နဲ့ နယ်ပြီးမှ ကြော်လေ့ရှိတယ်။ ကြွပ်ကြွပ်လေး ပိုစားကောင်းတယ်။ ပြောမှစားချင်လာပြီး)
Sambar mix က လေးလပိုင်းတုန်းကဝယ်လာတာ မိုးငွေ့လေး။ အရသာနဲ့အရောင်လှတာနဲ့ ပုံကိုပါတင်လိုက်တာ။ အဲဒိရုပ်ရှင်ကို ရန်ကုန်ပြန်တုန်းကတွေ့ရက်နဲ့မကြည့်မိဘူး။
ချောရေ သူငယ်ချင်းလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ချက်တတ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာ။
မမဝါရေ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီး ကိုယ်တိုင်အားပေးတာများတယ် သူကအသီးအရွက်ပဲစားတာများလို့။
ဝေး ဘေဘီရေ မချက်တတ်လို့ ကြက်ကင်ကိုဝယ် ပြီး သုပ်လိုက် အာလူးနဲ့ရောလိုက်စားနေရတာပါကွယ် ဟီး။ တောင်ပံကို ဆီပူလာတော့ ပြစ်ထည့်ပြီး အဖုံးပိတ်ထား ဆီပေါက်မှာကြောက်လို့ ခဏနေနောက်တဖက်လှန် ဘာမှလုပ်စရာမှမလိုတာဆိုတော့ ကောင်းကောင်းချက်ပြလိုက်တာပေါ့ကွယ် ဟီးဟီး။
အယ် အထင်ကြီးတဲ့လူတွေ သိပ်များနေပါလား။ ခေါင်းနာသွားလို့ကြည့်လိုက်တာ ဘယ်ဟုတ်မလဲ ခေါင်မိုးနဲ့သွားထိသကိုး အိုင်အိုရာရေ။
ကျေးဇူးပါ ကိုညီလင်းသစ် အဲဒါကိုမနေ့က ကြက်ကြော်မှာစားရင်းနဲ့ ထပ်တွေးနေမိသေးတယ်။
မမ Sweet ရေ အဲလိုမျိုးလဲကြိုက်တယ် ဒါပေမယ့် မကြော်တတ်လို့ ဝယ်စားတာများတယ်။ ပြောရင်းဆိုရင်း တော်တာတွေ လူသိကုန်ပြီ ဟီး။
နောက်တခေါက် မှ လုပ်စားကြည့်ဦးမယ် အန်တီရေ ကျေးဇူးပါနော်။